Ogeysiisyada Noofambar iyo Maqaallada khuseeya Bulshadeena - El Centro de la Raza
Ogeysiisyada Noofambar iyo Maqaallada khuseeya Bulshadeena
Laga soo bilaabo Goobaha xasaasiga ah ilaa meelaha la ilaaliyo: Sida loo hubiyo gelitaanka badbaadada leh ee adeegyada muhiimka ah iyo hawlaha muhaajiriinta
Waaxda Amniga Gudaha (DHS) ayaa soo saartay siyaasad cusub oo lagu hagayo tallaabooyinka dhaqangelinta socdaalka ee meelaha la ilaaliyo ama u dhow. Tilmaamaha, oo isla markaaba wax ku ool ah, ayaa meesha ka saaraya oo burinaya dhammaan hagitaanadii hore ee xasaasiga ahaa, isaga oo siinaya ilaalin aad u faahfaahsan oo cad oo soo-galootiga ah oo ka dhan ah ficilada fulinta meelaha ay si joogto ah u tagaan si ay u helaan adeegyo daryeel caafimaad, waxbarasho, jimicsi xor ah u ah inay cibaadaystaan ​​ama si guud isugu yimaadaan. iyo dhamaadka, helitaanka adeegyada muhiimka ah.
Sanadihii la soo dhaafay, El Centro de la Raza waxay u hurtay dadaalkeeda si kor loogu qaado loona faafiyo siyaasadaha goobaha xasaasiga ah ee ay soo saartay Waaxda Amniga Gudaha (DHS) 2011 iyo taas oo xaddiday ficilada fulinta socdaalka ee meelaha caamka ah ee lagu qeexay goobo xasaasi ah. Kuwaas waxaa ka mid ah xarumaha waxbarashada, xarumaha caafimaadka, goobaha cibaadada, xafladaha diiniga ah ama madaniga ah, iyo banaanbaxyo dadweyne sida dibad-baxyo ama dibad-baxyo. Dhanka El Centro, aqoonsiga meelaha xasaasiga ah waxay ahayd mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee la heli karo si loo taageero loogana ilaaliyo soogalootiga aan sharciyeysnayn dacwadda aan loo meel dayin ee wakiillada socdaalka. Waa arrintii, gaar ahaan xilligii maamulkii hore ee federaalka, oo hanjabaadaha musaafurinta joogtada ah ay ka dhigeen dadka soo galootiga ah inay ku nool yihiin cabsi iyo walaac, iyagoo u maleynaya in la xiri karo wakhti kasta iyo meel kasta oo ay tagaan, xitaa meelaha ay raadinayaan si ay ugu qanciyaan baahidooda degdegga ah. ama ay adeegsadaan xuquuqdooda bini'aadminimo, kuwa u gaarka ah qof walba, iyadoon loo eegayn xaaladdooda socdaalka.
Si kor loogu qaado siyaasadda goobaha xasaasiga ah, El Centro de la Raza waxa ay samaysay istiraatijiyad gardarro ah oo ay ku jiraan hawlo badan. Waxaan u diyaarinay qalab loogu talagalay goobaha xasaasiga ah ee suurtagalka ah (oo aad geli karto halkan; abuuray calaamad caalami ah si loo garto goobaha xasaasiga ah oo la diyaariyey oo la siiyey boodhadh meel kasta oo xasaasi ah oo danaynaya in loo aqoonsado sida. Waxaan sidoo kale martigelinnay kulamo xog-wareysi ah meelaha xasaasiga ah ee suurtagalka ah ee xiiseynaya barashada siyaasadda; iyo soogalootiga ku wargeliyay meelaha xasaasiga ah si ay u sii joogaan meelaha ay ka helaan adeegyada muhiimka ah cabsi la'aan. Waxaan rumeysannay oo aan weli sameynay, in faafinta siyaasaddu ay ka hortagayso soo galootiga inay iska celiyaan inay tagaan meelaha ay ka helaan baahiyaha iyo adeegyada aasaasiga ah ee qof kastaa u baahan yahay inuu ku noolaado nolol sharaf leh.
In kasta oo aan dadaalayna, iyo meelaha xasaasiga ah ee suurtagalka ah in laga ilaaliyo soogalootiga falalka fulinta, waxaan la soconay in siyaasaddu ay ka gaabisay hubinta helitaanka badbaadada muhaajiriinta ee adeegyada muhiimka ah qaarkood. Siyaasaddu waxa ay tilmaamtay meelo yar oo xasaasi ah iyada oo lagu darayo saraakiisha socdaalka waa in ay sameeyaan taxadar gaar ah marka ay fulinayaan hawlgallada meelmarinta meelaha lagu caawinayo carruurta, haweenka uurka leh, dhibanayaasha dembiga ama xadgudubka, ama shakhsiyaadka qaba naafo maskaxeed ama jireed oo weyn. Inkasta oo liisku aanu ahayn mid xaddidan, oo loo daayo go'aanka saraakiisha socdaalka, in la sameeyo hawlgallo dhaqangelin ah iyo in kale, ma aysan siinin hubaal soo-galootiga adeegyada ama xarumaha ay si badbaado leh uga qaybgeli karaan iyada oo aan khatarta ah in lala xiriiro maamulka socdaalka. Hubanti la'aantan ayaa ka horjoogsatay inay helaan adeegyo muhiim ah. Dhinaca kale, siyaasaddu kama cadda tallaabooyinka fulinta socdaalka ee u dhow meelaha xasaasiga ah. Cadayn la'aanta ayaa keentay jahawareer weyn oo ku saabsan sida ay wakiilada socdaalka ugu dhow yihiin meel xasaasi ah. Kiisas dhowr ah oo su’aalo la iska weydiinayo ayaa dhacay dhow, laakiin maya at goobaha xasaasiga ah, taas oo tusinaysa in saraakiisha socdaalka, halkii ay dadka soogalootiga ahi ka faa'iidaysanayeen siyaasada goobaha xasaasiga ah. Duruufahani waxay si cad u tuseen in siyaasadda wax laga beddelo oo la hagaajiyo inkasta oo ay caawimo ahayd wakhti meel kasta ay ahayd meel ammaan ah oo soo dhawayn leh oo loogu talagalay soogalootiga.
Nasiib wanaag, faa'iidada iyo wanaagga bulshooyinka soogalootiga ah, siyaasaddu way is bedeshay. Oktoobar 27-keediith Xoghayaha Amniga Gudaha, Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay siyaasad cusub oo lagu hagayo ficilada fulinta socdaalka ee meelaha xasaasiga ah ama u dhow, oo hadda loogu yeero meelaha la ilaaliyo. Sida laga soo xigtay DHS, beddelka magaca, laga bilaabo "goobaha xasaasiga ah" loona beddelo "goobaha la ilaaliyo" waxay ujeedadeedu tahay in la bixiyo faham sax ah/saxsan oo dheeraad ah in meelaha qaarkood ay u baahan yihiin tixgelin gaar ah. Halkii ay ahaan lahaayeen oo keliya, "xasaasi" waxay u kacaan heer la ilaaliyo sababtoo ah shaqooyinka laga qabtay meelahaas.
Tilmaamaha cusubi waxa uu si weyn u caddeeyey noocyada goobaha la ilaaliyo iyada oo la siinayo liis aan dhammayn karin oo meelaha la ilaaliyo, oo ay ku jiraan calaamado cusub sida tallaalka ama goobaha imtixaanada, goobaha waxbarashada diinta, meelaha ay carruurtu isugu yimaadaan (sida garoommada ciyaaraha, xarumaha madadaalada, ama joogsiga baska dugsiga) goobaha musiibada ama gargaarka degdega ah, iyo xarumaha adeega bulshada.
Waxaa intaa dheer, hab-raacu waxa uu aqoonsan yahay in "tallaabo meel-marin ah oo la qaaday meel u dhow oo aan qasab ahayn in aagga la ilaaliyo ay saameyn la mid ah ku yeelan karto gelitaanka shakhsiga ee aagga la ilaaliyo laftiisa". Sidaa darteed, waxay ku baaqaysaa in mas'uuliyiinta socdaalka aysan qaadin tallaabo dhaqangelin ah oo u dhow aagga la ilaaliyo, ilaa inta ugu macquulsan. Maaddaama aysan jirin qeexid toosan oo ku saabsan waxa ka dhigan “u dhow” hagahan ayaa ugu baaqaya mas’uuliyiinta socdaalka in ay fuliyaan xukunka iyaga oo is weydiinaya bal in ficilka dhaqangelintu uu dadka ka celinayo in ay galaan aagga la ilaaliyo si ay u helaan adeegyada muhiimka ah ama u galaan hawlaha muhiimka ah.
Siyaasadda cusubi waxay siisaa ilaalin ballaadhan oo macquul ah soogalootiga aan sharciyeysnayn, iyada oo hubinaysa inay heli karaan adeegyada muhiimka ah iyo hawlaha cabsi la'aan, waxayna taageertaa fikradda ah in dadku, iyada oo aan loo eegin xaaladdooda socdaalka ay awood u yeelan karaan inay helaan adeegyada muhiimka ah hanjabaad la'aan. Si kastaba ha ahaatee, waa lama huraan in la tababaro oo la baro saraakiisha socdaalka dhaqangelinteeda, iyada oo la hubinayo in ay ku dhaqmaan xukun macquul ah oo bini'aadannimo falalkooda. Dhanka kale, El Centro de la Raza waxay kor u qaadi doontaa tilmaanta cusub waxayna ku wargelin doontaa meelaha la ilaaliyo ee suurtagalka ah iyo bulshada baaxaddeeda iyo xadkeeda iyadoo hubinaysa in soogalootiga ay mar walba dareemaan ammaan, soo dhawayn, iyo ixtiraam.
Si aad u hesho Tilmaamaha Dhaqangelinta Tallaabooyinka gudaha ama meelaha dhow ee la ilaaliyo dhagsii halkan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto meelaha la ilaaliyo, fadlan kala xidhiidh Adriana Ortiz-Serrano at aortiz@elcentrodelaraza.org
Qiimo -dhimisyada Internetka ayaa weli laga heli karaa barnaamijka Dheefta Baahinta Degdegga ah
Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah (EBB) waa barnaamij si ku-meelgaar ah loo bilaabay si loo caawiyo qoysaska la halgamaya inay awoodaan adeegga internetka inta lagu jiro aafada COVID-19. EBB waxay bixisaa sicir -dhimis ilaa $ 50 bishiiba xagga adeegga fidinta ee qoysaska u qalma.
Barnaamijku wuxuu dhammaan doonaa marka sanduuqa EBB uu lacagtii ka dhammaado, ama lix bilood ka dib markii Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Dadweynaha ay ku dhawaaqdo in la soo afjaray xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19, hadba kii degdeg ah. Qoysaska ayaa u -qalma haddii ay helaan Medicaid, SNAP, ama dheefaha kale ee dadweynaha, ay u qalmaan qadada dugsiga, waxay hore ugu jireen barnaamijka Lifeline, waxay heleen deeqaha waxbarashada Pell, ama waxay waayeen shaqooyin iyo dakhli intii lagu jiray aafada. Macluumaad dheeraad ah oo u -qalmitaan: getemergencybroadband.org/do-i-qualify.
Degmada King ayaa bilaabaysa Kaalmada Dhaqaale ee Daryeelka Carruurta (CCFA)
Waxaa la cusbooneysiiyay jadwalka iibiyaha Plaza Roberto Maestas!
Ka fikir inaad Warqad u qorto Wargeyska Maxaliga ah [iyo Tilmaamaha Qaar ka mid ah Sida]
'Facebook waxay leedahay Bar Indha La' ': Waa maxay sababta Macluumaadka khaldan ee Luqadda Isbaanishku u kobcayaan
Falanqaynta qeexan ee cusub oo uu sameeyay Khabiirka Xuquuqda Codaynta ee UCLA: Qorshaha ugu dambeeya ee sharci-dejinta gobolka Washington waa in lagu daraa degmada u hoggaansan VRA ee dooxada Yakima
Dugsiyada Dadweynaha Seattle: Rugaha Talaalka Covid ee Ardayda 5 - 11
UNIDOS 2021 Shirarka Xiriirinta ee Dayrta: Horumarka Diiwaangelinta Saamaynta Furan
La kulan Julie*
Deganeyaasha sharciga ah ayaa hadda la weeraray iyagoo wajahaya Maamulka Trump
Previous post Previous: Cuentos ee Barnaamijyadayada iyo Bulshada: Noofambar 2021